Hogaamiyaha Xisbullah Oo Iran Ugu Baaqay nay Weerarto Israa’iil. - Awdal Media
Hogaamiyaha Ururka Xisbullah Shiikh Xasan Nasralah ayaa ugu baaqay dowlada Iiraan in ay garaacdo Israa’iil haddii Mareykanka uu weerar ku soo Qaado.
Qudbada wadaadkan oo si toos ah wuxuu uga Jeediyay Jimcihii Tv-ga Al-Manar.
Hadalkaan ayaa imaanaya iyadoo todobaadyadii la soo dhaafay uu sii xoogeysanayay qilaafka u dhaxeeya Washington iyo Tehraan.
Sh Nasralah ayaa intaa raaciyay in Mareykanka uu ogaan doono hadii dagaal uu ku qaado Iiraan uu saameyn doono Israa’iil.
Ururka Xisbullah ayaa ugu danbeyn sheegay in ay diyaar u yihiin in wax waliba ay ku bixiyaan difaaca Iiraan.